Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe maka mmemme gị iji rụzie faịlụ m? - DataNumen
Ọ dabere n’ihe ndị a:
Nha faịlụ gị. Ọ bụrụ na faịlụ gị buru ibu, mgbe ahụ ọ ga-ewe ogologo oge iji nyochaa ebe ọ bụ na mmemme anyị ga-enyocha ma nyochaa baiti ọ bụla na faịlụ gị, nke na-eri oge. Dịka ọmụmaatụ, 100GB PST ga-ewe ihe dịka 10 + awa iji rụkwaa.
Ihe mgbagwoju anya nke faịlụ gi. Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ data ma ha na-atụgharịrị ibe ha na faịlụ gị, mgbe ahụ ọ na - ewekarị oge iji rụkwaa ya. Iji maa atụ, a SQL Server MDF faịlụ nwere ọtụtụ tebụl, ndeksi, na ihe ndị ọzọ ga-ejikarị were ọtụtụ awa rụkwaa.
Ofdị faịlụ gị. Formatsfọdụ faịlụ faịlụ dị mgbagwoju anya, nke chọrọ oge karịa ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, AutoCAD DWG file bụ kama mgbagwoju, otú ọbụna a 5MB DWG faịlụ nwere ike were ọtụtụ awa rụkwaa.
ogologo ole, oge na-eri
Emelitere na May 15, 2021
Nchịkọta zuru ezu ọ ga-agbake karịa data karịa ụdị ngosi?Olee otu iji kwalite ngwaahịa m?